gold price | Ratopati
सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढ्यो access_timeजेठ ५, २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाँ बढेको छ । आजको कारोबार मूल्य तोक्दै महासंघले सुनको भाउ ५०० रुपैयाँले बढेको हो । मूल्य बढेसँगै छापावाल सुनको मूल्य ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य ९५ हजार ८०० रुपैयाँ छ । हिजो छापावा...
लगातार घट्दै सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? access_timeबैशाख १४, २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निरन्तर ८ दिनदेखि सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको जानकारी दिएको हो । वैशाख ५ गते सुन प्रतितोला १ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसयता आजसम्म निरन्तर आठौ...
सुनको मूल्य प्रतितोला १५०० ले घट्यो access_timeबैशाख ७, २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य तोलामा १५०० रुपैयाँले घटेको जानकारी दिएको छ । महासंघले आजको कारोबार मूल्य तोक्दै सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ५०० रुपैयाँले घटेको जानकारी दिएको हो । जसअनुसार, आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ६०० रुपैयाँ र ते...
सुनचाँदीको मूल्य स्थिर access_timeबैशाख ४, २०७९
आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर कायम भएको हो । गत शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख २ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य १ लाख १ हजार ५०० रुपैयाँ थियो । आज पनि छा...
सुनको मूल्य फेरि एक लाख रुपैयाँ नाघ्यो access_timeचैत २७, २०७८
साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको एक लाख तीन सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि, गत साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुन तोलाको ९९ हजार पाँ...
सातामा २०० ले घट्यो सुनको मूल्य access_timeचैत २६, २०७८
यो साता सुनको मूल्य प्रतितोला २०० रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्ममा सुनको मूल्य प्रतितोला २०० रुपैयाँले घटेको हो । गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार ७०० रुपै...
सुनको मूल्य ९९ हजार रुपैयाँ access_timeचैत २४, २०७८
सुनको भाउ बिहीबार पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार कायम भएको छ । यसअघि, मंगलबार सुन तोलाको ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बिहीबार तेजावी सुनको भ...
सुनको भाउ तीन सय रुपैयाँले घट्यो access_timeचैत २३, २०७८
सुनको भाउ बुधबार तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि, मंगलबार सुन तोलाको ९८ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार तेजाबी सुनको ...
सातामा १२ सयले घट्यो सुनको मूल्य access_timeचैत १९, २०७८
यो साता नेपाली स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबार यता सुनको मूल्यमा प्रतितोला १२ सय रुपैयाँको गिरावट आएको हो । गत साताको शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ९०० रुपै...
एकसय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य access_timeचैत १७, २०७८
अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार सुनको मूल्य एक सयले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला एक सय रुपैयाँले बढ्दै ९८ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबा...
४०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ? access_timeचैत १६, २०७८
बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले घट्दै बुधबार ९८ हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको हो । अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रत...
एकैदिन तोलामा ११ सयले घट्यो सुनको मूल्य access_timeचैत ९, २०७८
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला ११ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार हिजो मंगलबारको तुलनामा आज ११ सयले घटेको सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको हो । हिजो मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेर १ लाख...
प्रतितोला ३०० बढ्यो सुनको मूल्य access_timeचैत ७, २०७८
आज सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजको बजार भाउ तोक्दै सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको जानकारी दिएको हो । जसअनुसार, आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९९ हजार ५०० रुपैयाँ छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य आज...
सातामा २८ सयले घट्यो सुनको मूल्य access_timeचैत ५, २०७८
यो साता नेपाली स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ८०० हजार रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबारदेखि हिजो (शुक्रबार) सम्ममा उक्त मूल्य घटेको हो । गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख २ हजार ६०० र...
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो access_timeचैत ४, २०७८
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य शुक्रबार पनि सोही मूल्य कायम भएको हो । यस्तै, ...
ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य access_timeचैत २, २०७८
सुनको मूल्य यो साता ओरालो लागेको छ । साताको पहिलो दिन प्रतितोला एक लाख दुई हजार आठ सयमा किनबेच भएको छापावाला सुन साताको चौथो दिन बुधबार ९९ हजार तीन समय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साताको पहिलो दिनको तुलना...
सुनको भाउ ५ सय रुपैयाँले घट्यो access_timeफागुन १९, २०७८
नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको भाउ प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुन तोलाको ९९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।&nb...
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? access_timeफागुन १५, २०७८
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले घटेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला अधिकतम ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज आइतबार १४ सय रुपैयाँले घट्दै ९६ हजार ६०० रुपैयाँमा झरेको हो । यस्तै तेजावी सुनको मूल्य समेत आज तोलाम...
सुन चाँदीको मूल्य स्थिर access_timeफागुन २, २०७८
सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुबैको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सोमबार अघिल्लो दिनकै मूल्य कायम हुँदै सुन प्रतितोला ९५ हजार ५०० रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै, यता तेजाबी ...
सातामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य access_timeमाघ २९, २०७८
यो साता सुनको मूल्य प्रतितोला १५ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्म उक्त मूल्यले सुनको भाउ उकालो लागेको हो । गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ९२ हजार ५०० र...
अखिल क्रान्तिकारीका पवन कार्की सहित ८ जनालाई अनिश्चितकालिन निलम्बन